ကဗျာချစ်သူ (ခေးရော့စ်): ကဗျာချစ်သူ အသက်တစ်ရက်ကြီးသောနေ့
ဤဘလော့တွင် ရေးသားထားသော စာတစ်ပုဒ်ကို ဖြစ်စေ၊ စာတစ်ပိုဒ်ကို ဖြစ်စေ၊ စာတစ်ကြောင်းကို ဖြစ်စေ စီးပွားရေးအရ မဟုတ်ဘဲ မည်သည့်နေရာတွင် မဆို ကူးယူဖော်ပြလိုပါက ပိုင်ရှင်၏ ခွင့်ပြုချက် ရယူရန် မလိုဘဲ မည်သူမဆို ကိုးကားညွှန်းဆို၍ ပြန်လည် ဖော်ပြပေးမယ်ဆိုရင် ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်ရှင်။
လူ့လောကကိုစရောက်ကတည်းက အဖေနဲ့အမေကို ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ သမီးမိုက် အသက်တစ်ရက်ကြီးပြန်ပြီ။ အခုချိန်ထိလဲ ဘာရယ်မှ မည်မည်ရရ ကျေးဇူးမတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ သမီးဆိုးလေးကို အနွံတာခံပေးတဲ့ အဖေနဲ့အမေ သို့........................
မျက်စိ တစ်မှိတ် လျှပ်တစ်ပြက်အတွင်း
သမီးလေး ငိုချင်းက သည်းခြေရင်းကို
ဝေဒနာ လှိုင်းတံပိုး ရင်မှာတိုးလို့ဆိုတဲ့
ဲ စိုးရိမ်မကင်း ချစ်စိတ်ပြင်းတဲ့
ပြုမှားမိတဲ့ ပြစ်မျိုးများကို ခွင့်လွှတ်ပါလို့…………..
ကဗျာလေးက ကျွန်မ တစ်ခါတင်ဖူးတဲ့ကဗျာလေးပါ။ (27.02.2008)နေ့မှာကျရောက်မယ့် ကျွန်မမွေးနေ့မှာ ဒီကဗျာလေးနဲ့ ကျွန်မကိုသိပ်ချစ်တဲ့ ဖေဖေနဲ့ မေမေကို ဂါရ၀ါပြုချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ အမှတ်တရ ထပ်တင်လိုက်တာပါ။ ကဗျာလေးဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့ မွေးနေ့ကိတ်တွေ သုံးဆောင်သွားကြပါဦး။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ မွေးနေ့လို့အမည်တပ်ကြတဲ့ အသက်တစ်ရက် ထပ်ကြီးတဲ့ နေ့တစ်နေ့အတွက် အမှတ်တရပေါ့......
Posted by Chaos at Tuesday, February 26, 2008
သားဖြိုး February 26, 2008 at 4:16 PM
မခေးရော့စ်ရေ.... ယူခုကျရောက်သော မွေးနေ့မှသည် နှစ်ပေါင်း ရာကျော်သည်ထိ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြှေ့ခြင်းများစွာ နဲ့ ပြည့်စုံပါစေခင်ဗျာ...
Anonymous February 26, 2008 at 4:25 PM
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။ လိုအင်ဆန္ဒတွေလည်း ပြည့်ဝပါစေ။ မိဘကို လုပ်ကျွေးနိုင်တဲ့ သမီးကောင်းရတနာဖြစ်ပါစေနော်။
MgThaJan February 26, 2008 at 8:45 PM
Happy Birthday ပါ ကဗျာချစ်သူရေ :)
မုတ်သုန် February 27, 2008 at 1:32 AM
lwansay February 27, 2008 at 3:49 AM
ဟေး ဟေး ကွက်တိပဲ။ မွေးနေ့နဲ့တန်းတွေ့တာပါလား။
့Happy birthday !!! Be happy poem lover လေးခင်ဗျား။ ရောက်လေ အသံကြားသနား၊
မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေဗျာ။ မွေးနေ့မှသည် နောာင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိ လိုတိုင်းတလို့ ရနိုင်ပါစေ။
honey February 27, 2008 at 7:32 AM
တောင်ကြီးမှာ ပြန်ဆုံကြရင်လည်း မုန့်အစစ်တွေနဲ့ တ၀ကြီး ကျွေးနိုင်ပါစေဗျား။
ညကျရင်ကော birthday party လေး dinner လေး မလုပ်တော့ဘူးလား ဟီး... တစ်နေကုန် မီးခိုးတိတ်ရတာပေါ့။ Your other half ဆိုတာကရော ကိတ်မုန့်တမျိုးပဲလား... :)
သဉ္ဇာ - Thinzar February 27, 2008 at 8:14 AM
Anonymous February 27, 2008 at 8:38 AM
Happy Birthday Chaos! ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေနော်...
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပြီး ဘာသာ သာသနာအကျိုး သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်သော သမီးကောင်းရတနာလေး ဖြစ်ပါစေရှင်...
မင်းကျန်စစ်။ February 27, 2008 at 9:05 AM
မွေးနေ့ထက် တစ်ရက်နောက်ကျသွားပေမယ့် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ နောက်မွေးနေ့တိုင်းလည်း ပျော်ရွှင်ပါစေ။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးရခြင်းတွေ ပိုပြိး ပိုင်ဆိုင်လာနိုင်ပါစေ...
LIN LET KYAL SIN February 27, 2008 at 10:11 AM
မမရဲ့တစ်ဘ၀လုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းများနှင့်အတူ အောင်မြင်မှုများစွာကိုလည်း ထပ်တူရရှိပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် .. ။ ချစ်သောသူနှင့်လည်း အခက်ခဲမရှိ ပျော်ရွှင်စွာ တစ်ဘ၀လုံး လက်တွဲသွားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Happy Birthday sis !!!
Nyein Chan Aung February 27, 2008 at 10:18 AM
ပျော်ရွှင်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ။ အခက်အခဲအားလုံးကို ကျော်လွှားနိုင်ပါစေ ညီမရေ..။
Blazing inferno February 27, 2008 at 10:31 AM
May the road rise up,
May the wind be always,
May the sun shine warm,
And the rains fall soft
upon your field...
May the God hold you..
And May I have the chance the meet you and say " Happy Birthdy sis " in person...
ပြည့်စုံ February 27, 2008 at 11:22 AM
Happy Birthday ! Poem Lover
ein February 27, 2008 at 12:04 PM
ခုမှပဲ အမမွေးနေ့လေးကို သိရတယ်...
ယနေ့ကျရောက်သောမွေးနေ့လေးမှသည် နှောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲု့ဖြစ်နေတဲ့ ဘ၀လေးတထပ်ထဲ ကျနိုင်ပါစေရှင်...
မိဘ က အားထားရတဲ့ သမီးလိမ္မာလေးလဲ ဖြစ်ပါစေနော်အမ...
အမလဲ ပျော်ရွှင် အဆင်ပြေပါစေ...
စိုးထက် - Soe Htet ! February 27, 2008 at 3:31 PM
ခေးရော့စ် ... ၀င်္ကပါ ဆီမှာ ဆုတောင်းပေးပြီး ... ဒီမှာ မုန့်လာစားပါတယ် :P
ညိမ်းညို February 27, 2008 at 4:18 PM
ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ။ သူငယ်ချင်းချစ်တဲ့ ကဗျာတွေနဲ့
ထာဝစဉ် ပျော်မွေ့ခွင့်ရပါစေ :) မုန့်တွေလည်း တ၀ကြီး စား
tu tu February 27, 2008 at 5:11 PM
ပျော်ရွှယ်ဖွယ်မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ chaos ရေ...
မိဘကျေးဇူးဆပ်နိုင်တဲ့ သမီးအလိမ္မာလေး ဖြစ်ပါစေနော်...။
pandora February 27, 2008 at 6:34 PM
ပျော်ရွှင်စရာ လှပတဲ့ မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ
failure တွေရှိခဲ့လည်း ပြန်ပြန်ရုန်းထလို့ အောင်မြင်မှုကို အရောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။
Helena February 27, 2008 at 7:31 PM
သီရိ နေ့လည်က လာမလို့ အွန်လိုင်းမလာဖြစ်လို့ ခုမှပဲ ရောက်လာတော့တယ်။ နည်းနည်းနောက်ကျသွားပေမယ့် မှီသေးတယ်။ တော်သေးလို့.... Happy Birthday to u... ချစ်မမရေ။ လိုအင်ဆန္ဒမှန်သမျှ စိတ်က တောင့်တလိုက်တာနဲ့ အမြန်ဆုံး ပြည့်ဝပါစေ။ အဓိကကတော့ မမ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။ :) muahh :*
tayzar February 27, 2008 at 10:32 PM
ဟီး နောက်တောင်ကျသွားတယ် အမ chaos ရေ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ =) စားစရာမုန့်တော့ကျန်သေးတယ် ထင်တယ် ဟုတ် =D
မျှားပြာ February 28, 2008 at 1:36 AM
အစ်မချောရေ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေပါဗျာ ..။
လင်း February 28, 2008 at 10:17 AM
နောက်ကျလို့ဘာမှမကျန်တော့ဘူး
Saung Yune La (aka) Way February 29, 2008 at 5:45 AM
layma February 29, 2008 at 10:24 AM
အမြဲထာဝရ... ဘ၀ ကိုကျေနပ်စွာ... ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ...။
မင်းယွန်းသစ် February 29, 2008 at 2:40 PM
Happy Birthday my sis!! ကျွန်တော် ခရီးလွန်သွားလို့ ခုမှရောက်ဖြစ်တယ် မမရေ..။ အသက်တစ်နှစ် ကြီးသွားတိုင်း အတွေ့အကြုံအသစ်တွေ၊ အတွေးအခေါ်အသစ်တွေ ရသတဲ့။ မမ က ကျွန်တော်ထက် အသက်ကြီးတော့ ပိုပြီး အတွေးအခေါ်တွေ များလာမှာပဲနော်။ ဂုဏ်ယူပါတယ် မမရေ။ အသက်တစ်နှစ် ကြီးလာပြန်ပြီ အော် နီးလာပြီနော်။ ဟဲဟဲ လူကြီးဖြစ်ဖို့ နီးလာပြီ ပြောတာပါ ခွိခွိ..။ နောက်နှစ်များမှာလဲ ခုလို မွေးနေ့ကို ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ လို့ မောင်လေး ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ;)
မင်းယွန်းသစ် February 29, 2008 at 2:49 PM
အားရပါးရ ကောမန့်ရေးပြီးမှ ဗျာ ကောမန့်က ပေါ်မလာဘူး ။ ဗြဲ...။ အဲလေ.။ မမရေ အသက် ဆန္ဒရှိသလောက်ရှည်ပြီး တွေးတောကြံစည်တိုင်း အောင်မြင်ပါစေနော်။ အော် .. အသက်တနှစ် ကြီးလာတော့ နီးလာပြီနော့။ အဲလေ လူကြီးဖြစ်ဖို့ နီးလာပြီ ပြောတာနော် ဟီးဟီး။ နောက်နှစ်မှာလဲ ဒီနှစ်လိုပဲ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ မောင်လေး ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်။
သက်ဝေ March 1, 2008 at 8:15 AM
လှပတဲ့ မွေးနေ့ လေးဖြစ်ပါစေ။
BLACK DREAM March 9, 2008 at 8:17 AM
Chaos ရေ အဆောင်မှာ Connection ကလည်းကျ..လူကလည်း စိတ်ဓာတ်ကျ...ဘိုင်ကလည်းကျ..(အဲမှားလို့ အဲဒါမဆိုင်ဘူး)..နေတာနဲ့ ဘယ်မှလည်း မလည်ဖြစ် ဘာမှလည်း မတင်ဖြစ်လို့ မွေးနေ့ကို တော်တော်ကြီးနောက်ကျပြီးမှ သိရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး..Feb Born အချင်းချင်း..ကဗျာကို မြတ်နိုးသူ အချင်းချင်း...နောက်မဖြစ် စေရပါဘူးလို့ ကတိပေးရင်း... ငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့ လောကတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...။ :)
မိုးလှိုင်ည March 26, 2008 at 10:06 PM
အခုလို အချိန်ပေးပြီး လာရောက် ဖတ်ရှုတဲ့ လူအားလုံး ကွန်မန့် ပေးသွားတဲ့လူအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ အတွေးအမြင်တွေကို လွတ်လပ်စွာ၊ နွေးထွေးစွာ ဖလှယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။
Testing Yourself (1)
အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာလိုသူများ အတွက်
ဒိုင်း ဒိုင်း မောင်ဒိုင်း
ချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းလေး မိုး
ကျွန်တော်တို့ ချစ်တဲ့ ကဗျာတွေတဲ့
Raven သွေး အလှူရှင်များ အသင်း
Justamediocre person who wants to leadasimple life. Even that simple wish is very very difficult to be fulfilled.
ဒီလို ကြောတွားကြတယ် အဟဲ